Helitaanka Macluumaadka Cilmi-baarista ee Afrika - AfricanArXiv
Gudaha Sayniska Dijitaalka ah taxanaha blog cilmi baarista la xiriirta SDG, xubin ka tirsan la-taliyaheena Joy Owango ayaa wax ka qortay SDG 4, Waxbarashada Tayada leh.
Aqri maqaalka asalka ah digital-science.com/blog/perspectives/sdg-series-accessing-research_info-in-africa/
Joy Owango, maamulaha at TCC Africa
Dhowr sano ka hor, markii aan ka shaqeynayey shahaadada qalin-jabinta ee Mass Isgaarsiinta, waxaan si cad u xasuustaa inaan ku dhibtooday helitaanka waraaqaha cilmi baarista ee la xiriira shaqooyinkeyga. Waxaan dareemay jahwareer in meesha kaliya ee aan ka heli karo waraaqahaas ay ahayd maktabadda machadka cilmi-baarista caalamiga ah ee Nairobi. Waxaan iska fadhiyi lahaa meel ka baxsan maktabada kadib markay xidhnayd, si aan u helo marinka elektaroonigga ah anoo isticmaalaya Wifi-warkooda. Waqtigaas, waxaan moodayay inay taasi caadi ahayd - qeyb ka mid ah halganka lagu sameynayo shahaadada jaamacadda. Ma ahayn illaa toban sano kadib markii aan ka ogaadey dhaqdhaqaaqa furan ee loo yaqaan 'Open Access Movement'. Waa maxay indhaha-furitaanka! Mid ka mid ah kuwa “sideese ku ogaan waayey tan?” daqiiqado.
Mid ka mid ah kuwa ugu niyad-jabka badan (iyo, aan ka hor tagno, xanaaq xad-dhaaf ah!) Qaybo ka mid ah cilmi-baaristu waxay isku dayaan inay galaan marinno suugaaneed tacliimeed oo la xiriira, keliya si loo ogaado inaan la heli karin. Tani maahan dhibaato cusub. Mushahar bixintu waxay caan ku ahayd daabacaadda aqooneed. Marka la fiiriyo Afrika, celceliska jaamacadda ma awoodi karto helitaanka ilaha ilaha si ay u sameyso cilmi baaris waxayna ku xadidan tahay xogta ay ku deeqday daabacayaasha iyo la-hawlgalayaasha warshadaha baarista. Nasiib darrose, qaar ka mid ah xogtan ayaanan wali cusboonaysiin, marka waxaa jira xaddidid dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka aqoonta isbeddelada ugu dambeeyay ee cilmi baarista.
Ka gudubka caqabadaha iyada oo loo marayo Wadashaqayn
In kasta oo ay jiraan caqabadahaas, haddana inta badan waddammada ka hooseeya Saxaraha ayaa isu yimid si ay u abuuraan a xiriirinta maktabadda kaas oo taageeraya bulshooyinka tacliinta iyo cilmi baarista. Waxay gorgortan la galaan daabacayaasha iyo shuraakada warshadaha ee cilmi baarista sidii ay marin ugu heli lahaayeen ilaha sahaminta cilmi baarista. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay jiraan jiritaanka maktabadahaas maktabadda, iyo marka laga reebo maktabadda Qaranka South Afrika iyo Consortia Macluumaadka, inta badan wali waxay la halgamayaan sidii ay ku heli lahaayeen faa iido, laakiin qaali ah, xog raadinta. Marka laga tago Koonfur Afrika ma aha wax la yaab leh sida, marka loo eego machadka tirakoobka ee UNESCO ee 2018, wuxuu ku qarashgareeyay 6.16% GDPkeeda waxbarashada - kharash aad u weyn marka la barbar dhigo inta badan wadamada kale ee Afrika.
Marka la barbardhigo, consortia consortia ee Yurub waxay awood u yeelan karaan inay la yimaadaan heshiis isbadal oo furitaan ah, sida Projekt DEAL ee Jarmalka, kaasoo abuuray iskaashi lala yeesho Springer Nature taas oo keentay in marin loo helo qodobbada lacagta la wadaago iyo daabacaadda fursadda furan ee loogu talagalay baarayaasha Jarmalka hal lacag bixin. Sida ku xusan heshiiska, cilmi baadhayaasha xarumaha Projekt DEAL waxay awood u yeelan doonaan inay ku daabacaan joornaal ku saabsan 1,900 Springer Nature oo ah $ 2,750 (ama qiyaastii $ 3,000) warqad kasta. Lacagtani waa mid aad u kacsan oo runti aan awoodin qarashka maktabadaha Afrikaanka ah.
Tayada waxbarashada iyo SDG 4
Sidee UN-ka afaraad horumarineed oo waara oo horumarineed oo ku saabsan waxbarashada tayada leh uu gacan ka geysan karaa ka-hortagga isbeddellada wanaagsan ee aaggan? SDG4 waxay leedahay bartilmaameedyada soo socda:
Marka la gaaro 2030, hubi in dhallinta oo dhan iyo qayb weyn oo ka mid ah dadka waaweyn, rag iyo dumarba, ay gaaraan akhris-qorista iyo xisaabta
Marka la gaaro 2030, hubi in dhammaan bartayaashu ay helaan aqoonta iyo xirfadaha loo baahan yahay si kor loogu qaado horumar waara, oo ay ku jiraan kuwa kale, iyada oo loo marayo waxbarasho horumar iyo cimri-waara, xuquuqaha aadanaha, sinnaanta jinsiga, kor u qaadidda dhaqanka nabadda iyo rabshadaha, adduunka. dhalashada iyo qadarinta kala jaadnimada dhaqamada iyo kaqeybgalka dhaqanka ee horumarka waara
Sida laga soo xigtay Warbixinta Muuqaalka Dhaqaalaha Afrika ee 2020 ee Bangiga Horumarinta Afrika, in ka yar 10% dadweynaha da'doodu tahay 25 sano iyo wixii ka weyn ayaa leh waxbarasho jaamacadeed dhammaan waddamada Afrika.
Tani waxoogaa waa la filan karaa. Barnaamijyada postgraduate-ka ma ahan kuwo raqiis ah, oo qiimahoodu u dhexeeya $ 4,000 iyo $ 18,000, iyadoo ku xiran koorsada iyo jaamacadda. Inta badan ardayda postgraduate-ka ayaa ah iskood isu abaabulay oo u eg inay ka garab shaqeeyaan waxbarashadooda. Bixinta lacagta helitaanka daabacaadda jeegaanta ma ahan mid suurta gal ah, waxayna u horseedi kartaa walaac badan ardey badan, bacdamaa helitaanka xadidan ee ardayda cilmi baarista ay ku qasban yihiin macluumaadka ay heli karaan halkii ay ahayd tan ugu habboon.
Ardayda dhigta imtixaanka dibloomada jaamacadda waxay u muuqdaan kuwa nasiib badan, maaddaama inta badan tabarucayaashu ay awoodaan inay bixiyaan lacagta helitaanka kheyraadka loo baahan yahay si ay u sameeyaan cilmi baaris, iyo in qoraaga dacwadaha lagu soo oogo looga baahan yahay inay daabacaan daraasaddooda. Natiijaduna waa mid cilmi-baadhis u leh cilmi-baarayaashu inta u dhexeysa kuwa maalgaliya dibloomaasiyadda iyo kuwa aan ahayn. Furan 'Open Access' waxay yareyn kartaa sinaan darrida, hubinta in ardayda ay helaan waxbarashadda ugu wanaagsan ee suurtagalka ah, iyo taas oo aan si badheedh ah u xaddidan xulista joornaalada cilmiga ah ee xarumoodyadu ay awood u leeyihiin inay bixiyaan, iyadoo aan loo eegin inay dhaqaale ahaan taageerayaan iyo in kale.
Yaraynta sinaan la'aantu xagga helitaanka macluumaadka cilmi baarista
Macluumaadka cilmi baarista ee 'Open Access' waxay awood u leedahay inay dimoqraadiyad ka dhigto waxbarashada sare iyada oo la siinayo ilaha loo sinnaado ardayda iyo cilmi baadheyaasha. Hab-nololeedka tacliinta iyo cilmi baarista ee caadiga ah waxaa ka mid ah kaabayaasha iyo kaabeynta awoodda aadamiga. Xarkaha isku haya sidan waa xog. Gaar ahaan, Xogta Ikhtiyaarka ee Furan (Open Access data) waxay bixisaa dhiirigelinta kordhinta tayada wax soo saarka cilmi baarista ee la soo saaray iyadoo la siinayo aragtiyo dheeraad ah oo ku saabsan cilmi baarista jira. Baarayaashu waxay awoodaan inay ka fogaadaan shaqada la soo diray. Waxay awoodaan inay kordhiyaan aragooda iyo saameynta ay ku leeyihiin deeqda waxbarasho iyada oo loo marayo tixraac. Baadhitaankooda si fudud ayaa loo wadaagaa. Tan ugu muhiimsan, haddii xogtu ay u furan tahay sida marin loo heli karo, qoditaanka qoraalka ayaa fudud.
Sanadkii 2007 Ururka midowga afrika wuxuu amar ku bixiyay in wadamada afrika in ay ku bixiyaan ugu yaraan 1% GDPkooda cilmi baarista iyo hormarinta (R&D). Tani waxay qayb ka ahayd Istaraatiijiyadda Sayniska, Teknolojiyadda iyo Hal-abuurnimada ee Afrika (STISA-2024) bilaabis taas oo ka hadlaysa mustaqbalka qaaradda Afrika si kor loogu qaado ugana jawaabo fursadaha maalgalin la kordhiyey ee sayniska, teknolojiyadda iyo hal-abuurka (STI) qaaradda oo dhan. Dhamaadka maalinta, kheyraadka (dhaqaalaha, nooca iyo nooca aadanaha) ayaa go'aamin doona guusha STISA-2024, iyo STI iyo horumarka warshadaha ee qaaradda. In kasta oo la aqoonsanayo qiimaha taageerada caalamiga ah iyo maalgashiga tooska ah ee shisheeye, heerka lacagaha Afrika iyo maalgelinta kaabaya ilaha dhaqaale waxay go'aamin doontaa heerka lahaanshaha Afrika ee horumarka STI iyo, sidaa darteed, jihooyinka mustaqbalka dhaqan-dhaqaale iyo horumarka bey'ada ee qaaradda (Warbixinta STISA 2019).
Amarkan ayaa horseeday in 15 dal oo Afrikaan ah ay go'ansadaan in ay ugu yaraan 1% ka helaan GDP-da R&D. Wadamadan waxay qayb ka yihiin Golayaasha Deeqaha Sayniska oo ujeedadooda loo siman yahay ay tahay in kor loogu qaado sayniska furan iyo xogta dalalkooda. Ururka Jaamacadaha Afrika, dallada dalladda dhammaan machadyada tacliinta ee Afrika, ayaa si isku mid ah uga go'an inay kor u qaadaan sayniska furan iyo xogta si ay u kordhiyaan wax soo saarka cilmi baarista Afrika iyo kor u qaadista aragtidooda.
Bishii Sebtember 2019, Itoobiya waxay qaadatay a siyaasada marinka u furan ee qaran ee loogu talagalay machadyada tacliinta sare. Marka lagu daro amraynta Helitaanka Furan ee daabacadaha iyo xogta, siyaasadaha cusub waxay dhiirigelisay dhaqamada sayniska ee furan iyadoo ay ku jirto 'furfurnaan' mid ka mid ah shuruudaha qiimeynta iyo qiimeynta soojeedinta cilmi baarista. Tani waxay ka dhigeysaa waddankii ugu horreeyay ee Afrikaan ah inuu yeesho siyaasad marin u helid furan, kaasoo amraya furitaanka dhammaan qoraalladii la daabacay, muuqaallada, qoraalladii iyo xogihii ka soo baxay baaritaanka ay dowladdu maal gelisay ee ay sameeyeen shaqaalaha iyo ardayda jaamacadaha ee ay maamusho Wasaaradda Sayniska iyo Tacliinta Sare - in kabadan 47 jaamacadood oo kuyaal daafaha Ethiopia.
Afrika waxay horumarineysaa daabacaadda akadeemiyada ee loo yaqaan 'Open Access' oo daabacaadda akadeemiyadeed ah oo loo maro Akademiga Afrika ee Sciences (AAS), oo leh Qalabka Cilmi-baarista Furan (Open Research Platform) oo ay iskaashanayaan Kuliyadda 1000 (F1000). Ururada sida Cilmibaadhista4Life (kaas oo Sayniska Dijitaalka ah lagu taageerayo marin u helka cabbir) waxay sidoo kale siisaa marin u helida macluumaadka cilmi baarista, halka TCC Africa ay sii wado taageerista cilmi baarayaasha iyada oo la dhisayo kalsoonidooda iyo aqoontooda ku aadan helitaanka macluumaadka cilmi baarista. Waxay bixisaa madal loogu talagalay daabacaad deg deg ah iyo dib-u-fiirin furan oo loogu talagalay cilmi baarayaasha ay taageerto AAS iyo barnaamijyada lagu taageerayo iyada oo loo marayo aaladda maalgelinta, Isbaheysiga Dardargelinta Sare ee Sayniska ee Afrika. Afrika waxay sidoo kale leedahay bakhaar furan oo loogu talagay bakhaarka furan AfricaArxiv, kaas oo aqbala soo gudbinta aqooneed ee baarayaal Afrikaan ah iyo qof kasta oo cilmi baaris ka sameeya Afrika.
Horumarradan lagu sameeyay sayniska furan waxay gacan ka geysanayaan sidii loo horumarin lahaa tayada waxbarashada iyo qaaradda Afrika, iyo tan ugu muhiimsan ee la siinayo cilmi-baarayaashu Afrikaanka inay ku kordhiyaan heerka madax-bannaanida cilmi-baaristooda. Adigoo xoogga saaraya sidii loo gaari lahaa himilooyinkaan SDG, waxaa la rajeynayaa in cilmi baarayaashan Afrikaanka ah, iyo tan kale bulshada cilmi baarista caalamiga ah, ay ka faa'iideysan doonaan helitaanka si isku mid ah macluumaadka cilmi baarista, sidaas darteedna cilmi baaris fiican.
Tags: Joy OwangoHimilooyinka Horumarka Sare
tristique in adipiscing id id, bahdilaad,